Umculi kamaskandi unikele eZwilesizwe Primary | News24
LAST UPDATED: 2019-08-20, 14:08
Umculi kamaskandi unikele eZwilesizwe Primary
ISITHOMBE : lethiwe makhanyaNgesikhathi uBahubehe enikela esikoleni samabanga aphansi Izwilesizwe ngoLwesine olwedlule.
UMCULI kaMaskandi uMnuz Sbusiso Mkhize nowaziwa ngelika “Bahubhe” unikele ngama-pads kubafundi bamantombazane abenza ibanga lesikhombisa (Grade 7) esikoleni samabanga aphansi iZwilesizwe eMbali Unit BB, ngoLwesine olwedlule mhla zingama-31 kuNhlaba (May).
Lo mculi odabuka endaweni yase-Jolivet uthe lena enye yezindlela abuyisela ngayo emphakathini.
Uthe njengoba ewumculi ubona kungumsebenzi wakhe ukuthi uma kukhona akutholayo abuyisele emphakathini.
“Angigcinile kulesi sikole kuphela ngisazonikela ezikoleni ezahlukene nasemiphakathini eyahlukene ngezinto ezahlukene.
“Lokhu kungenye yezindlela engibuyisela ngayo emphakathini njengoba nabo bengeseka emculweni wami,”kubeka yena.
UBahubhe uthe lo msebenzi wokunikela akawenzanga yedwa kuphela kodwa usebenzisane noNkk Sameela Raja oze kuyena ezocela ukuba amlekelele ukuze bezonikela kulesi sikole.
UNkk Raja uthe: “Esontweni lethu sinesikhathi sokunikela esibizwa ngokuthi yi-Ramadan nami-ke ngibe sengikhetha ukuba sizonikela lapha kulesi sikole. Ngibe sengithinta iqhawe lami [uBahubhe] ukuthi angilekelele yingakho sigcine sifikile. Into eyenze ukuba sikhethe ukunikela ngama-pads yingoba siyazi ukuthi akusizona zonke izingane eziphuma emakhaya ame kahle futhi akusibona bonke abazali abanemali yokuthengela izingane zabo ama-pads.
“Asifuni ukuthi izingane zigcine sezihleli emakhaya zingayi esikoleni ngoba zingenawo ama-pads. Sisazoqhubeka nalolu hlelo siyonikela nakwezinye izikole,” kubeka yena.
Ikhansela lakule ndawo uMnuz Thamsanqa Sithole uthe bakujabulele kakhulu ukuthi kunabaculi abasacabanga ukubuyisela emphakathini.
“Siyazi sonke ukuthi izingane eziningi zigcina zingayi esikoleni ngoba zizenyeza ukuthi azinawo ama-pads. Lento ayenzile uBahubhe nethimba lakhe izobasiza kakhulu abafundi ukuthi bangaphuthwa izifundo zabo ngenxa yokungabi nama-pads.
“Siyafisa-ke futhi sengathi noMnyango wezeMfundo ungaqhubeka ulekelele izikole ngezinhlelo ezifana nalezi,” kubeka yena.
Uthishanhloko wesikole naye ubonge wanconcoza kuBahubhe ethi into ayenzile izolekelela abafundi abaningi esikoleni.